Isixhobo sokuhlamba esilungileyo
Ukukhetha nokuthenga kwezixhobo, i-brand sisihlala siqhathanisa umxholo, akukho nto inokuthi abavelisi abagunyazayo, ubugcisa babo kunye neenkonzo zentengiso zithengisa ngakumbi, esi sixhobo sinceda kakhulu kubacoca abomileyo basebenze ngokukhawuleza.
Ngoko, izixhobo zokuhlamba ezilungileyo? Ukugcina kwiinkalo zobuchwephesha, kunye nenzuzo yokusebenza ngokuluhlaza u-ENEJEAN ukuhlambuluka kwamazwe ngamazwe kuya kulungele ngakumbi ukuphuhliswa kwexesha elizayo. Kwakhona, UKWENZISA izinto zokucoca ezinomileyo zingasetyenziswa ngqo ngumenzi wokukhetha nokuthenga, ngoko unokunciphisa uhlahlo lwabiwo-mali.
Ngako-ke iindleko ezinjani kwiisethi zokuhlambuluka emhlabeni? Ngaba ingaba ngamashumi amawaka ezincinci, kodwa iimfuno zokucwangcisa ezithile okanye zibone ivenkile. Imveliso kunye nezixhobo, kufuneka zithobele ingqalelo kumandla wokuhlamba kunye neengxaki zokulandela emva kokuthengisa, le ndawo ikhuselekileyo ukwenzela ukukhusela iimfuno zabo malunga nelahleko.
Kwizixhobo zokugcinwa kunye nokugcinwa, kufuneka uphulaphule iingcebiso ezingakumbi. Ukusetyenziswa kweenkcukacha zezinto zokusebenza kufuneka kuthobele ingqalelo, ukufunwa kweenkonzo kunye nokufumana ulwazi oluninzi kunokusebenzisa kangcono izixhobo zokusebenza.
Ingakanani isethi yezinto zokucoca ezinomileyo
Kwakhona, engaqhelekanga kwimveliso yococa yokucoca, sinethemba lokuba sinokuphucula ukukhanya kwabo, musa ukukholelwa ngokungathethekiyo okanye ukuthenga, thintela ukuzisa ilahleko zezoqoqosho.
Inqaku lokugqibela: Indlela yokuchonga amaxabiso o...
Inqaku elilandelayo: Hlanganisa nethemba lokucoceka...